ESET မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး & Antivirus ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ESET မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး & Antivirus ကို
ESET မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး & Antivirus ကို APK ကို
ESET မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ကာကွယ်ပေးသည်တဲ့ပရီမီယံဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်install လုပ်ပြီးနောက်, သငျသညျအလိုအလျှောက်ကြိုးစားကြည့်ရ 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့အားလုံး Premium feature များ - စာရင်းပေးသွင်းခြင်းမရှိဘဲ။ ထိုအခါသင်နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ် ဆု, ဒါမှမဟုတ်အဘို့တစ်သက်တာဖြစ်သည့်အခြေခံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, နှင့်အတူဆက်လက် အခမဲ့.
user ကအစပျိုး✓တွင်-ဝယ်လိုအား Scan ကို
ဆွဲယူတဲ့ applications များနှင့်ဖိုင်များကို✓တွင်-access ကို Scan ကို
✓ Anti-Theft - အဝေးမှ Lock ကိုအတူအဝေးမှဥဩနဲ့ GPS Localization ကို SMS များက activated
✓ USSD အားနည်းချက်ကာကွယ်မှု
✓ Tablet ကိုဖော်ရွေ interface ကို
Premium Features များစာရင်းသွင်း
။ my.eset.com အပေါ်ကို web interface ကိုနှင့်အတူတက်ကြွသော Anti-Theft
။ Scheduled စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့
။ on-charger ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး
။ automatic updates များကို
။ ပိတ်ဆို့ခြင်းကို SMS / MMS ကို / ခေါ်ရန်
။ အရေးကြီးသော settings ကို၏ device စောင့်ကြည့်
တက်ကြွသော anti-theft စမ်းကြည့်ပါ
. my.eset.com နှင့်အတူပေါင်းစည်းမှု ESET Smart လုံခြုံရေးဖြင့်ကာကွယ်ထား Android ထုတ်ကုန်နဲ့ Windows Laptop တွေအဘို့ကို web interface ကို
. သံသယဖြစ်ဖွယ်ပြည်နယ် - ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှားယွင်းနေ PIN နံပါတ် / ပုံစံထဲသို့ဝင်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆင်းမ်ကဒ်ပြောင်းလဲမှုတွေ့ရှိသောအခါ
. ကင်မရာရုပ်ပုံများ - တပ်ဦး / နောက်ကျောကင်မရာရိုက်ချက်
. မျက်နှာပြင်ကို Message တွင် - အလားအလာ device ကို Finder မှစိတ်ကြိုက်သတင်းစကား
. ဘက်ထရီအားနည်းနေသည် - device ကိုဝေဖန်ဘက်ထရီအဆင့်တာမျိုးပါလျှင်၎င်း၏လက်ရှိတည်နေရာ my.eset.com ထံသို့စေလွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်
. အသုံးပြုသူရဲ့ IP Address ကိုအသေးစိတ်များ - အိုင်ပီ၏အိမ်ခန်းနှင့်ပျောက်ဆုံးအဖြစ်မှတ်သားလျှင်ကိရိယာချိတ်ဆက်ခဲ့သည်အမှာစကားပြောကြား
ကြှနျုပျတို့၏ Beta စမ်းသပ်ရန်လူမှုဆက်သွယ်ရေး JOIN
ESET မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းပေါ်တွင်သင်၏လက်၌ Get နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ link ကိုအောက်ပါငါတို့က Android app များကိုများ၏အနာဂတ်ပုံဖော်ကူညီဖို့: https://play.google.com/apps/testing/com.eset.ems2.gp
သင့်ရဲ့ Android device ကိုများနှင့်အဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ ESET အမျိုးမျိုးသောခွင့်ပြုချက်ပေးရန်သင်မေးပါလိမ့်မယ်။ ESET ဒေတာစုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော! ခွင့်ပြုချက်အသီးအသီးအမျိုးအစားအသုံးပြုသည်အဘယ်အရာကိုတစ်အသေးစိတ်ရှင်းပြချက်အဘို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာအခြေစိုက် http://kb.eset.com/android ကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး
သငျသညျ ESET မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး & Antivirus ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့မဆိုပြဿနာများကိုကြုံတွေ့ရနေတယ်ဆိုရင်, သင် menu button ကိုတွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်ရယူနိုငျသောအဆိုပါ In-app ကိုပုံစံတစ်မျိုး၏အနိမ့်စိတျအပိုငျးမှာတည်ရှိပါတယ် (ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်တမ်းဖိုင်များကိုပေးပို့ပါ ထို့နောက် device ကို) နှင့် '' ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှု '' ပေါ်နှိပ်။
သငျသညျ ESET မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး & Antivirus ကို install လုပ်ပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏တုံ့ပြန်ချက်ပေးပို့ဖို့သငျသညျကို enable တံ့သောကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များ, မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်ပဲမင်္ဂလာပါလို့ပြောချင်ရှိပါက play@eset.com ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို e-mail ကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အံ့ဖွယ် 2017 update ကိုခံစားကြည့်ပါ!
- တိုးတက်လာသော Anti-Phishing ဟာငါးစာအမီလိုက်ရန်သင့်ပါစေဘယ်တော့မှ
- Polish user interface ကိုယခုမထိဖို့ပိုကောင်းသလို & အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်
- tweaks "ဟုအဆိုပါပါးပျဉ်းအောက်မှာ" လူအမြားတို့အများအပြားကပို
မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး & Antivirus ကို
10.63 ကို MB
Zemana Antivirus ကို ...
VIRUS Cleaner ...
လုံခြုံရေး Antivirus ကို 2019
စူပါ Antivirus ကို ...
လုံခြုံရေး Defender ...
Palash jyoti ရွိုင်း says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 17, 2014 မှာ 7: 10 ညနေ
NIC app ကို ... .. jakas ... ရုံ rokkkjk
pashuram chaudhary says:
အောက်တိုဘာလ 14, 2014 မှာ 1: 57 ညနေ
က me.it ဘို့ကောင်းတဲ့ app ကိုလည်ပတ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်ပါပဲ။
Kuvar Chandra yadav kkyadav says:
စက်တင်ဘာလ 25, 2014 မှာ 11: 57 ညနေ
ပျား Santana says:
ဇူလိုင်လ 18, 2014 မှာ 9: 19 နံနက်
ဒီနည်းကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ပါဝါ FULL လုံခြုံမှု soft IS
ဧပြီလ 4, 2014 မှာ 6: 35 ညနေ
ဒီ ESET ထုတ်ဝေအကြောင်းကိုမဆိုအင်ဖို (ဒီဗားရှင်းဝင် username နှင့် password ကိုဖွစျစနေို): ဒီအခမဲ့, ရုံးတင်စစ်ဆေးသို့မဟုတ်ကဘာလဲ?
ဧပြီလ 2, 2014 မှာ 8: 49 ညနေ
သင့်ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်ရန်အတွက်အလွန်စေ့စေ့စပ်စပ်ပြီးတော့ Good.I'm ကျေးဇူးတင် Is
ဇူလိုင်လ 28, 2017 မှာ 9: 13 ညနေ
nill Akash says:
မတ်လ 2, 2014 မှာ 3: 11 ညနေ
ဒီ soft..So ကောင်းသော ........................... ကောင်းသော ..
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2014 မှာ 1: 19 ညနေ
ကောင်းသော apps တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2013 မှာ 11: 41 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2013 မှာ 2: 10 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 15, 2013 မှာ 8: 46 ညနေ
ငါဒီ application ကိုကြိုက်တယ်
နိုဝင်ဘာလ 15, 2013 မှာ 8: 43 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 27, 2013 မှာ 1: 27 ညနေ
shanto biswas says:
အောက်တိုဘာလ 7, 2013 မှာ 1: 47 ညနေ
ကောင်းတဲ့ doit ESET မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး &
စက်တင်ဘာလ 27, 2013 မှာ 12: 23 ညနေ
ဒါကြောင့်သကဲ့သို့ငါ၏ phone.I ၎င်း၏လွန်းကောင်းသော
စက်တင်ဘာလ 7, 2013 မှာ 11: 52 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 7, 2013 မှာ 10: 16 ညနေ
nice ။ အသစ်က available.Thanks အခါငါ့ကိုအကြောင်းကြားကျေးဇူးပြုပြီး